Shabaab oo weerar Qaraxyo ku bilowday ku qaaday Deegaanka Bariire. - Hablaha Media Network
Shabaab oo weerar Qaraxyo ku bilowday ku qaaday Deegaanka Bariire.
HMN:- Dagaal-yahanada Al Shabaab, ayaa saakay weerar xoogan ku qaaday Deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha Hoose, oo billo ka hor ay la wareegeen Ciidamada Huwanta.
Dagaal-yahanada Shabaabka, ayaa waxay weerarkan ku ekeeyeen xeryaha Ciidamada Dowladda Somaliya ku leeyihiin Deegaanka Bariire. Weerarka waxa uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay ilinka hore ee xerada.
Dadka deegaanka, ayaa waxay sheegeen in ismiidaaminta ay xigtay weerar toos ahaa oo Shabaabku ay ku hareereeyeen xerada, waxaana hadda halkaasi ka soconaya dagaal qaraar.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali (Najax), ayaa qiray in Shabaabku ay saakay dagaal ballaaran ku soo qaadeen Deegaanka Bariire, welina uu dagaalku socdo.
Gudoomiyaha, ayaa waxa uu xaqiijiyay inay dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah, ka dib markii ay gaysteen niman la socday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
Al Shabaab, ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka saakay lagu ekeeyay Bariire, iyagoona tilmaamay in dagaal-yahanadoodu ay ka dagaalamayan halkaasi.
Dadka reer Bariire, ayaa waxay inoo sheegeen in iyagoo hurdo ay mar qura hurdada kaga baraarugeen qarax aad u xoogan, ka dibna ay xigtay rasaas dhawr jiho ka dhaceysa.
Weerarkan, ayaa baqdin ku abuuray bulshada deegaanka, waxaana iminka la soo sheegaya in xaaladda deegaanku ay tahay mid aad u cakiran, iyadoo uu jira khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo weerarku uu sababay.